အခြောက်ဆိုတာ….ဘာလဲ?ဘယ်လဲ? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Gay/Lesbian » အခြောက်ဆိုတာ….ဘာလဲ?ဘယ်လဲ?
Posted by naywoon ni on Nov 7, 2010 in Gay/Lesbian, My Dear Diary | 10 comments
ဒီစကားလုံးကလေးကိုတော့ယူသုံးခွင့်ပြုပါ…… ဒီစကားလုံးဟာမြန်မာစာအသုံးထဲမှာဆရာစသုံးခဲ့တယ်ထင်လို့ပါ “မြန်မာစာပေဘာလဲ.?..ဘယ်လဲ?
ဆိုတဲ့ဆရာ့ဝေဖန်ရေးစာအုပ်မှာပထမဆုံးတွေ့ဖူးတာမို့ပါ။ ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ရတာက 1985-86မန္တလေးတက္ကသိုလ်ပထမနှစ်ကျောင်းသား
ဘ၀မှာဖြစ်ခဲ့ရတာပါ……။ ကျွန်တော်ကစာရေးစာဖတ်ဝါသနာပါသူဖြစ်လေးတော့ ဆယ်တန်းကို15နှစ်နဲ့ဇွတ်အတင်းကြိုးစားပြီးအောင်လာရတာပါ…..။
အဲဒိအချိန်ကကျောင်းသားတွေသိပါလိမ့်မယ်..။ ခိုးချတယ်ဆိုတဲ့ဝေါဟာရဟာနှစ်ဟောင်းကျောင်းသားကြီးတွေသာလုပ်ရဲတဲ့ကိစ္စပါ…။ ကျွန်တော်ဘာကြောင့်
ဒီလောက်ကြိုးစားခဲ့ရသလဲဆိုတော့ စာရေးခြင်းအတတ်ပညာကိုတက္ကသိုလ်မှာကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လေ့လာသင်ယူချင်လို့ပါ..။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလည်း
ဖြစ်ရောကိုယ့်ကိုကိုယ်ကဗျာသမားအဖြစ်ခံယူပြီး စာသမားပေသမားတွေနဲ့ပဲပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာသိတဲ့အတိုင်းပဲမန္တလေးမြို့တော်မှာစာသမားတွေပေါများ
ဒီတော့ကျွန်တော်ဆရာ့စာအုပ်တွေအပါအ၀င်…န်ိုင်ငံရေးစာအုပ်တွေ.. ဘာသာပြန်စာအုပ်တွေ.. စာပေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘ၀ကိုဖြတ်
သန်းလာခဲ့တာ1987ဒုတိယနှစ်စာမေးပွဲအထိပါပဲ……။ ဒီနေရာကိုဘာလို့ဖြတ်လိုက်ရသလဲဆိုတော့1987မှာစာမေးပွဲတန်းလန်းနဲ့ကျောင်းတွေပိတ်လိုက်လို့ပါပဲ
နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဘာသာရပ်နဲ့မြန်မာစာဖြေပြီး ကျောင်းပိတ်လို့အိမ်ပြန်ပြေးခဲ့ရတာပါ..။မပြေးလို့လဲမရပါဘူး။ ဇွတ်အတင်းရထားပေါ်တင်ပေးလိုက်တာလေ……..
နောက်လေးလလောက်နေလို့ စာမေးပွဲပြန်ဖြေခိုင်းတဲ့အခါရောက်တော့စာကူးချတာ ခောတ်စားလာပါပြီ။ခိုးမချရင်ပဲခောတ်မမှီတော့သလိုဖြစ်နေပါပြီ
တော်တော်ပြောင်းလဲသွားတာပါ…. ကူးချဖို့စာရွက်တွေကိုသူငယ်ချင်းတွေကဟိုဟိုဒီဒီ ထည့်ပေးလိုက်ပေမဲ့မထုတ်ရဲတာနဲ့ပဲစာမေးပွဲအကျခံလိုက်ပါတယ်…။
ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းတွေကတော့အပြောင်းအလဲကို အလွယ်တစ်ကူလက်ခံလိုက်ပြီးစာမေးပွဲအောင်သွားကြပါတယ်..။ သူတို့လည်းကျွန်တော့လိုပဲစာအုပ်ရှိသူများ
နောက်စာမေးပွဲအောင်စာရင်းလေးသာထွက်လာပြီးကျောင်းပိတ်လိုက်တာကတော့ 3နှစ်လောက်ပါပဲ..။ ကျွန်တော်ကတော့ဝမ်းမနဲခဲ့ပါ
ကျွန်တော်ပါလာခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေအပြန်ပြန်အလှန်လှန် ဖတ်ရင်းနဲ့နောက်စာအုပ်အသစ်တွေစုလို့ပေါ့…။ စာအုပ်တွေကလည်းဈေးချိုပါတယ်။မဂ္ဂဇင်းအဟောင်း
တစ်အုပ်မှနှစ်ကျပ်သုံးကျပ်ပါ..။ ဆရာတို့ရေးခဲ့တဲ့သုံးကြောင်းကဗျာတွေကိုအကြောင်းအရာပြောင်းပြီး ပြန်ရေးကြည့်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီဆိုဒ်မှာတင်ခဲ့တဲ့သုံးကြောင်းကဗျာ(ရင်ခုန်သံ)ဟာ1990မှာရေးခဲ့တာပါ။ နောက်တော့ဆရာမောင်သာနိုးရဲ့ထင်းရူးပင်ရိပ်စာအုပ်ကိုဖတ်ခဲ့ရပြီးမော်ဒန်ကဗျာ
ဘက်ကိုရောက်သွားပါတယ်…။ မဂ္ဂဇင်းတွေမှာဆရာဇော်ဇော်အောင်ရဲ့ မော်ဒန်ဝတ္ထုတွေနဲ့ရင်းနှီးခဲ့ပြီးလိုက်လေ့လာခဲ့ရတာပါ..။ အနီးကပ်လေ့လာစရာမရှိပေမဲ့
သူငယ်ချင်းတွေဆီပို့ပြီးဖတ်… သူတို့ရေးတာတွေလည်းပို့ကြနဲ့အသက်နှစ်ဆယ်မပြည့်ခင်ကပျော်စရာလေးတွေပါ…။ ဒါပေမဲ့စာပေအနုပညာရဲ့ခံယူချက်တော့ပြင်း
ဖတ်ခဲ့ရတာပါ..။ ရေးတဲ့သူကကော… ညလူခြေတိတ်တဲ့အချိန်ကျမှအိပ်ရေးပျက်ခံရေးခဲ့ကြရတာပါ..။ ဒါပေမဲ့ပိုက်ဆံနင့်နေအောင်ရပါတယ်…
ခုအွန်လိုင်းမှာလိုဝါသနာကြောင့်ရေးကြသူတွေချည့်မဟုတ်ပါဘူး။ ခုတော့အင်တာနက်သုံးခ ကိုယ့်အိတ်ထဲကစိုက်ပြီးသူများမျက်စေ့စပါးမွှေးစူးအောင်
ရေးနေကြတဲ့သူများကို ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်များရှိနေသလဲမေးကြည့်ချင်ပါတယ်။။ ဒီထက်ပိုဆိုးတာကတော့ဆိုရှယ်လူမှုရေးဆိုဒ်တွေမှာပါလူ့အခွင့်အရေး
ဘန်းပြပြီးမျက်နှာပြောင်တိုက်ရေးတင်နေကြတဲ့ကိစ္စကတော့.. ဆိုဒ်အက်ဒမင်ကိုရောမင်ဘာတွေကိုရော.. ၀င်ရောက်ဖတ်ရှု့နေတဲ့အများပြည်သူကိုပါစော်ကား
ရာရောက်ပါတယ်..။ ကိုယ်ဖာသာရေးချင်တယ်(အားနေတယ်။ ၀ါသနာပါလွန်းနေပါတယ်။မရေးရမနေနိုင်လို့ပါဆိုရင်လည်း) ကိုယ်ပိုင်ဆိုဒ်နဲ့ပဲရေးရေးလိင်ဆိုဒ်တွေမှာပဲ
သာမာန်လိင်ကိစ္စအငွေ့အသက်လောက်ပါတဲ့စာပေလောက်တောင်အင်တာနက်ထဲမှာကျမှထိတွေ့ယဉ်ပါးရတဲ့မြန်မာလူမျိုး အများစုဟာဒီလိင်တူကိစ္စကိုလက်ခံ
နိုင်ပါ့မလားစဉ်းစားကြည့်ကြပါဦး..။ မပြောမဖြစ်လို့ထည့်ပြောရဦးမယ် ကျွန်တော့်ဆရာတစ်ယောက်ပြောခဲ့ဖူးတဲ့စကားတစ်ခွန်း……………
ကျောင်းပြန်ဖွင့်တော့ ကျွန်တော်တို့တက်ရတဲကအတန်းထဲမှာအခြောက်တစ်ယောက်ပါလာပါတယ်..။ ဆရာကစာသင်ချိန်ပြီးတော့သူ့အနားလာပြီးအများရှေ့တင်
ပြောသွားတဲ့စကားပါ..။အတန်းတူများဖတ်မိရင်မှတ်မိကြပါလိမ့်မယ်။” မင်းကယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလား” ဆိုတော့တော်တော်နဲ့မဖြေပါဘူး
ဆရာကတော့ပြတ်ပြတ်ပါပဲ..။ အများကိုလှည့်ကြည့်ပြီး”သူကယောက်ျားစဉ်စစ်ကမိန်းကလေးစိတ်ပေါက်နေရှာတယ်.. မင်းတို့အနိုင်မယူကြပါနဲ့ဆရာသိတာကတော့
သူတို့လိုလူမျိုးတွေဟာ..သာသနာဘောင်မှာဝင်လို့မရပါဘူး… လောကကိုရှေ့ဆောင်ဦးရွက်ပြုမဲ့သူတွေထဲလည်းမပါပါဘူး… ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ပေးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်
ပြီးတော့မင်းတို့စဉ်းစားကြည့်ခွေးတွေမှာခွေးထီးက ခွေးမစိတ်ဝင်ပြီးဆက်ဆံတာတွေ့ဖူးလားတွေ့ဖူးရင်လည်းနဲလိမ့်မယ်။ အဲမတွေ့ဖူးရင်တော့သွားပြီ
အဲဒိအကာင်လောက်တောင်အသုံးမကျတော့ဘူး… အရပ်ထဲမှာမင်းတို့ဆုတောင်းသံကြားဖူးပါလိမ့်မယ် ဘယ်ဘ၀ရောက်ရောက်အထီးစစ်စစ်သာဖြစ်ရပါ၏
လို့…..ဆုတောင်းရုံနံ့မရဘူးကွ။ ကာမေသုဆိုတဲ့ကံမကျူးလွန်တဲ့သူမှလူဖြစ်ရင်လူထီး(ယောက်ျား)ဖြစ်တာ။ ခွေးဖြစ်တော့လည်းခွေးထီးပေါ့…………
သွားရတာ။၀ဋ်နာကံနာတစ်မျိုးပေါ့ကွာ……။ အဲဒါကြောင့်သူကမင်းတို့ကိုအနှောက်အယှက်ပေးမလာမချင်း အနိုင်မကျင့်ကြပါနဲ့လို့ဆရာပြောတာပါ”
လူ့ အခွင့်ရေးဆိုပြီးပြောကြတော့ ကိုယ်လည်းဘာလုပ်လို့ ရမှာလဲ
လုပ်လို့ ရလည်း ဘာမှ လုပ်စရာမရှိဘူး
အမုန်းတရားနဲ့ ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေ ကိုယ့်ဖာသာ လွပ်လွပ်လပ်လပ် လှုပ်ရှားလို့ရတဲ့နေရာတွေ အများကြီး ရှိတာဘဲ ခုတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူး စည်းရုံးနေတာလား ဘာလဲ
ကိုယ်ကလဲ ဘာသာရေးရှုထောင့်ထည်းကဘဲ တိုက်တွန်းတာပါ ဒီကံကြီးကို ကိုယ်ကထိုက်နေတဲ့ဥစ္စာ
အဆင်ပြေသလိုနေလိုက်ပေါ့ ခုတော့ အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး တစ်လောကလုံးကို သူ့ ဇာတ်ခင်ချင်နေတာလားမသိ
လူ့ အခွင့်ရေးကြီးနဲ့ ပြောတမ်းဆိူကွာ မင်းတို့ ဇာတ်ကို အားလုံးခင်းရရင် လူသားတွေမျိုးတုံးရချည်ရဲ့ 
ဒါပေမယ့် ငါကတော့နေတတ်တယ်နော် မင်းကိုယ်မင်းဆင်းစား
မူမမှန်တဲ့ ဘဝကို ကိုယ်ရနေတာ
ငါကတော့ မင်းကို ဘာသာရေးရှုထောင့်ထဲကဘဲ ဆုံးဖြတ်စေခြင်တယ်
တစ်ခါတစ်လေ ဖင်ထဲ လက်နှိုက်ပြီး ပြန်နမ်းကြည့်တာ တော်တော်နံတယ် ဟီးးးးးး
အင်း…. တော်တန်တိတ်လိုက်ကြရအောင်ပါ ဒီအခြောက်ကိစ္စကို
စာမျက်နှာအုပ်ချုပ်သူများကို တစ်ခု တောင်းပန်ချင်ပါတယ် .. လိင်တူကိစ္စ ဆက် မတင်ရင် ကောင်းမယ် .. ဘယ်သူတင်တင် ဖြုတ်ပေးစေချင်တယ်
ကဲ Admin တို့ရေ အများတောင်းဆိုနေကြတာလဲ ကြာပါပြီ…ဒီphyo ဆိုတဲ့ ဂျီပုန်းရေးတဲ့post တွေကို မတင်ပေးပါနဲ့တော့ဗျာ။
ယိုသူမရှက်ပေမဲ့ မြင်ရတဲ့သူက အော့နှလုံးနာမိတယ်။
ဒီကောင့်ကို အပြင်မှာခေါ်တွေ့ပြီး စအိုကို ဆေးပေါ့လိပ်စာကြွေးလိုက်ရင် နောက်ခြောက်ဖို့ စဉ်းစားသွားပါလိမ့်မယ်။
တခါတုန်းက ရန်ကုန်ကအခြောက်တစ်ယောက်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပြည်မြို့သွားတာ ခပ်ချောချောဖြောင့်ဖြောင့်ကောင်လေးကို တွေ့တော အခြောက်တွေထုံးစံအတိုင်း ၀င်လုံးပြီး စော်တကားမယ်ပေါ့ဆိုပြီး ခြုံသွားတိုးတာ ဟိုကောင်က ခြုံထဲလဲရောက်ရော ဓါးထောက်ပြီးပစ္စည်းတင်မကဘူး သောက်မြင်ကပ်ကပ်နဲ့ သူ့လုံချည်၊အင်္ကျီတွေပါချွတ်ယူထားလိုက်တယ်။ သူ့နေတဲ့အလုပ်နေရာကို under wear လေးနဲ့ပြန်ရောက်လာတယ်။ ငိုအားထက်ရယ်အားသန်ပေါ့ဗျာ…သူ့ကြည့်ပြီးရီလိုက်ရတာ..
မလုပ်ကြပါနဲ့တော့ဆရာတို့ရယ် ဘယ်နေရာသွား အ၆ကိုတော် ကြောက်ပါတယ် …။
ဟုတ်တယ်.. လူ့အခွင့်အရေးလို့ အော်နေတိုင်း ဒါကြီးကို လက်ခံပေးလို့မရပါဘူး.. သူတို့ကုသိုလ်ကံနဲ့သူတို့ဖြစ်တာကို သူများတွေကိုပါ လိုက်ပြီးဆွဲဆောင်နေတယ်… စဉ်းစားကြည့်ရင်သူတို့တွေ တော်တော်ကို လူဖြစ်ရှုံးတာပါ… မြင့်မြတ်တဲ့ ယောက်ျားဘဝရောက်တာတောင်.. မြင့်မြတ်တဲ့ သာသနာ့ဘောင်ကို ဝင်ခွင့်မရှိဘူး… ဒါက အထိနာဆုံးပဲ..
တကယ်လို့သူတို့လိုလူမျိုးတွေများလာမယ်ဆိုရင်.. တစ်ချိန်မှာ ကိုယ့်ညီအစ်ကိုအချင်းချင်း သူငယ်ချင်းအချင်းချင်း.. အရမ်းရင်းနှီးလို့ ပုခုံးဖက်သွားရင်တောင် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က သို့လော သို့လော အထင်ခံရမှာ… ပြဿနာကကြီးလာမှာ.. ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားနေတဲ့ မြန်မာပြည်မှာ ဒီကိစ္စလက်ခံခိုင်းဖို့ မတိုက်တွန်းကြပါနဲ့… ဖြစ်နေတဲ့သူတွေလည်း ကိုယ့်ကုသိုလ်ကံလို့သာသဘောထားပီး.. နောက်ဘဝမှာ ဒီလို နိမ့်ပါးတဲ့ကုသိုလ်ကံမျိုးမဖြစ်အောင် ဘာသာရေးကိုအလေးပေးလို့ လုပ်ပါလို့ပဲတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်……
kyaw win thant says:
လူ့ အခွင့် အရေး..။ ဟုတ်ပါပြီ။ အခြောက်တွေမှာလူ့ အခွင့်အရေးရှိတယ် ထားပါတော့။ လိင်တူချင်းဆက်ဆံ ဖို့ ရာ အဆက်ဆံခံတဲ့သူ ရော ဆက်ဆံတဲ့သူမှာပါ..သူတို့ ပစ္စည်းနဲ့ သူတို့ လုပ်ချင်ရာလုပ်ဖို့ အခွင့်အရေးရှိတယ် ပဲထားပါတော့။
စကားကပ်တာမဟုတ်။ မိုက်ရိုင်းတာမဟုတ်ဘူး.။ အဲလိုနှစ်ဦးသဘောတူရင် ဘာမဆိုခွင့်ပြုကြေးဆိုရင်
(မရိုသေ့စကား ကန်တော့ပါရဲ့ ဗျာ) ကိုယ့်အမေ ကိုယ့်နှမ သားချင်းနဲ့ …(နှစ်ဦးသဘောတူကျေနပ်လို့ ) လိင်ဆက်ဆံတဲ့သူတွေကို လူ့ အသိုင်းအဝိုင်းထဲထည့်ပြီး..“ ရဲ ရင့် ကြပါပေ။ ပွင့်လင်းကြပါပေ။ လူ့ အခွင့်အရေးရဲ့ပြယုဂ်ပါပေ.” ဆိုပြီး ကြိုဆိုဝှဲချီးကြမှာလားဗျ။